एक दशकपछि गर्भिणी भए चार ढोई « प्रशासन
एक दशकपछि गर्भिणी भए चार ढोई
इटहरी । सुनसरी जिल्लाको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा पालिएकाका एक दशकपछि चार ढोई (पोथी हात्ती) त्यहाँ आउने जङ्गली हात्तीको संसर्गबाट गर्भिणी भएका छन् ।
उक्त आरक्षमा रहेका पाँचमध्ये अम्बिकाकली, सरस्वतीकली, शोभाकली र लक्ष्मीकली नाम गरेका हात्ती गर्भिणी भएपछि उत्साहका साथ आफूहरू छावाको प्रतिक्षामा रहेको आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार साहले बताए । संरक्षणमा रहेका ढोईका कारण फिरन्ते जङ्गली हात्ती आरक्ष क्षेत्रमा आउने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । गर्भधारणपछि ढोईले १८ देखि २१ महिना भित्र छावा जन्माउने गर्दछ । आरक्षमा १० हात्ती राख्न सकिने व्यवस्था रहे पनि हाल पाँच मात्र छन् ।
उक्त आरक्षबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगिएका दमदमकली र सरस्वतीकली २८ वर्षपछि वि.सं. ०६३ मा कोशीटप्पुमा फिर्ता ल्याइएको थियो । चितवानबाट अरु तीन हात्ती फिर्ता हुन बाँकी छन् । चितवनमा हात्ती चढेर जङ्गल सफारी गर्ने पर्यटक बढेपछि वि.सं. ०४५ मा ती हात्ती चितवन लगिएको आरक्ष प्रशासनले बताउँदै आएको छ ।
आरक्षको क्षेत्र विस्तार र सुरक्षाका लागि ती हात्ती पनि पूर्वाधार तयार गरेर फर्काइने प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार साहले बताए । हात्तीमा चढेर आरक्ष घुम्न विदेशी पर्यटकका लागि दुई हजार र स्वदेशीलाई ५०० राजश्व लिने गरिन्छ । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक हात्तीमा शयर गर्न रुचाउन थालेको आरक्षले जनाएको छ । चितवनमा रहेका हात्तीका लागि दाना र माउतेको तलबभत्ता समेत उक्त आरक्षले नै ब्यहोर्दै आएको छ । रासस